トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Ndithini Xa udibana umphefumlo wethu liwele?
Twin Umphefumlo yinto yokwenene [Free 3500 yen yovavanyo lwentsebenzo] ukuya oosiyazi of ukufumana indlela
nogxa wakhe akuthethi kuphila kusoloko kweli xesha kunye lizwe elifanayo. ivame uza kuphinda ehamba ngokwahlukileyo uyaphila. Nokuba sakwazi ukuhlangabezana umphefumlo amawele kweli hlabathi ukuba ibe kufutshane ummangaliso, kwaye kananjalo womyoleli umphefumlo ngalinye omnye ikhule eliphezulu kwinqanaba ngokusebenzisa ntlungu.
Ngoko ke, mna, sidibana nabantu ababonakala umphefumlo ngamawele, ulonwabo Masibhale esulungekileyo ukuba bakwazi ukuhlangabezana nogxa wakhe. Xa wadibana ezabo nje kuphela, kufuneka waneliseke ukuba zihlangane welinye icala. Loo mvakalelo ngokunyaniseka ngayo, ngokuthi olugunyazisa beqonda ukuba umphefumlo ezimbini omnye komnye, uya umphefumlo lowo wahamba ebhadula phakathi ubuxoki elide ngaphakathi lula ukuqhubeka ukhangele ulonwabo ukuze abe mnye.
newele Seoul njengoko xa bobabini
? omnye okanye utshate ibali eliqhelekileyo
newele Seoul baphathwa ukuba umntu otshatileyo, kuthiwa xa umphefumlo ikhule ukuze soyise inani lemingeni kuwe. Ngenxa yesi sizathu, oko kudla i kuqubisana ixesha kuxa kuza ubomi ethile isidanga. Xa wadibana libali eqhelekileyo kwakhona into yokuba elinye okanye omabini sele sitshatile.
umdlali okanye ubuso bakhe ngenyameko phambi kokusebenza kubudlelwane, yaye kwimeko zaye amahlakani ezithengwe zombini, uya kuba nako ukuyeka umphefumlo ngamawele ngoka omnye. Nakuba kunjalo, kufuneka ukunqanda lungabanjiswa kwisehlo, ukukhathaza neqabane ngoku. Kuqala kwinto zonke, ejongene ukusuka ngaphambili ukuya isiphelo sabo, simele siqhubeke ngokucothayo ngononophelo egqibile abantu ababini. Oku kwakhona kucingelwa ukuba ibe nobunzima obekwe kwi umphefumlo ngamawele, makhe sifumane phezu ukuze ufumane eyona ndlela ifanelekileyo.
? isiphelo ukuhlangana
umphefumlo iwele ukuba ningabaleki yaye kukhusela ukuba phantse ngummangaliso, ndadibana Ukususela into yokuba baziva negalelo elikhulu ngelo xesha, kukho kwakhona ityala ukuba nesiphumo elabalekayo kwimiyalelo kwentliziyo yam Ndicinga ukuba kwadalwa. Kodwa ke ayikho kuphela ikamva ilizwi njengekhaka. Kungenxa yokuba isiphelo, ndizama Omoikomo ukuba kufuneka abantu ababini oniwe kungqonge ndawonye.
njengoko kuchaziwe apha ngasentla, le meko leyo Awabotshwanga nokuba ufuna ukuba ongabotshwa luvavanyo olinike abantu ababini. Ukoyisa le nquleqhu, nayo ukuze sikhule eliphezulu umphefumlo omnye komnye, yamkela nje kakuhle le meko kunokuba engalawulekiyo, kuba le nto kubalulekile ukuba amalungiselelo.
nje uthando umtshato nomphefumlo amawele injongo, akunyanzelekanga ukuba ibe kwimeko oludityaniswe ngokukuvumela uye njengoba ndandidibana umphefumlo amawele. Kakade ke, kuyinto eqhelekileyo ukuba ukuvakalisa phambi yovuyo ngoko wadibana, ukuba akunjalo kakuhle ngokwaneleyo imeko xa abantu ababini libotshelelwe, kubalulekile ukuba ngokuqinileyo nayo le meko.
Ukongeza, kuphela uthando okanye umtshato njengendlela uhambe umphefumlo iwele ayikho usukelo. Kwakhona bekuya kuba yenye iintlobo ukuya kwenye umkhondo njengoko umhlobo ilungileyo ebomini.
Ukuba akunjalo, kubalulekile ukuba ngokuqinileyo nayo le meko.